गर्मीमा जति सक्दो धेरै प्याज प्रयोग गर्नुहोस ,यस कारण लाभदायक छ प्याज « Channel Np
गर्मीमा जति सक्दो धेरै प्याज प्रयोग गर्नुहोस ,यस कारण लाभदायक छ प्याज
प्रकाशित मिति : Wednesday, May 15th, 2019 at 2:45 PM
केही साता अघिदेखि गर्मी ह्वात्तै बढेको छ । यस्तो गर्मी सिजनमा मानिसहरुले खानपानमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । गर्मी सिजनमा कयौं मानिसहरुले आफूलाई तन्दुरुस्त राख्न चिसो चिज बढी खान्छन् । केहीले त आफ्नो भोजन नै कम गर्ने गर्छन् । साथै केही मानिसहरुले मौसम अनुसारको भोजनमा पनि विशेष ध्यान दिन्छन् । ती भोजनहरु मध्ये प्याज पनि एक हो । प्याज हाम्रो मुलुकमा पनि बढी प्रयोग गरिने खाद्य पदार्थ हो ।
हामीले प्याजको प्रयोग बढी मात्रामा भान्छामै प्रयोग गदैृ आएका छौं । यसरी हामीले दिनहुँ उपयोग गर्दै आएका प्याजका कयौं गुणहरु रहेका छन् । यो एक बेजोड खालको औषधि पनि हो । प्याजको प्रयोग धेरै रोगको उपचारको लागि हुने गरेको छ ।
प्याजको सेवनले इम्यसनिटी पावर बढाउछ । अनुहारमा नरम पन , आँखाको ज्योती बढ्छ । प्याजमा कयौं पोषक तत्व हुन्छ । जस्तो भिटामिन सी, फलाम जस्ता बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाइन्छ ।
प्याजमा लगभग ११ प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ ।
यस्ता छन् अन्य फाइदाहरुः
गर्मी याममा खाना सजिलै नपच्ने भएकाले कतिपयलाई पेटसम्बन्धी समस्या हुन्छ । तारेको, भुटेको खाना खाँदा समस्या झन् बढ्छ । यसो हुँदा प्याज प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
जाडो यामको तुलनामा गर्मीमा उच्च रक्तचापको समस्याले सताउँछ । विशेष गरी, गर्मी मौसममा मुटु रोगीको रक्तचाप नियन्त्रणमा रहिरहनु आवश्यक हुन्छ । रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्न मुटु रोगीले प्याज खानुपर्छ । यसमा भएको तत्वले रक्तचाप नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ।
गर्मीमा कतिपयलाई धेरै पसिना आउँछ । पसिनाले गर्दा धुलो र फोहोर छालामा सजिल्यै टाँसिन्छन् । जसका कारण छालासम्बन्धी विभिन्न समस्या देखापर्छन् । यी समस्याबाट बच्न प्याज प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सौन्दर्यका लागि पनि प्याज लाभदायी छ । गर्मीमा बढी पसिना आउँदा धुलो टाँसिएर कपाल चिपचिप हुनेगर्छ । यसो हुँदा प्याजको रस लगाउनु फाइदाजनक हुन्छ । प्याजको रसले कपालको जरा बलियो बनाउँछ ।
कहालीलाग्दो अन्त्यष्टी : पाँचथर हत्याकाण्ड भिडियो (हेर्नुहोस )
इटहरी उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीद्धारा कामकाज ठप्प
गर्मीको समयमा सेक्स, कतिपटक र कतिबेला गर्ने ?
ताप्लेजुङ घर भई कोटेश्वरमा बस्दै आएका राईले आकाशे पुलबाट हामफालेर गरे आत्महत्या !
जस्ले बालिकालाइ रातभरी लुकाएर जोगाइन, उनैले घटनाको नयाँ रहश्य खोलीन ।(भिडियो सहित)
पढ्नैपर्ने चौध प्रेरक अनि मनछुने लाइनहरु
जेठाजुले यी3कारणले भाईको श्रीमती मारे ! बाहिरियो हत्या हुनु भन्दा 10 मिनेट अगाडी भनेको यस्तो कुरा (भिडियो सहित)
पाँचथर हत्याकाण्ड अपडेट -पोस्टमार्टमपछि गाउँमा , अन्तिम बिदाईको समयमा आफन्तको रुवाबासी, ( भिडियो सहित)
चुनावको मत परिणाम सुन्दा भारतमा हृदयघात भएर एक नेताको मृत्यु
छुट्टीमा घर आएका सैनिकले श्रीमतीको बनाए यस्तो हालत ,कारण बुझ्दा सबै अचम्मित
पाँचथर हत्याकाण्ड ,सामुहिक चित्तामाथी अन्त्यष्टि गरिँदै , हार्दिक श्रद्धाञ्जली मृतकहरु प्रति
Phone : +9779816909058